कतै घुम्न जाने सोचमा हुनुहुन्छ ? यो लेख तपाईलाई काम लाग्न सक्छ ! | Arthatantra.com
घरजग्गामा मात्र हैन अब नक्सा पासमा पनि आयो नयाँ नियम काठमाण्डौं । महानगरपालिकाले नक्सा पासका लागि जग्गाधनी स्वयम् उपस्थित हुनुपर्ने नयाँ नियम […]
काठमाण्डौंमा अझै ३ सय ६५ वटा सडक चौडा गर्न बाँकी काठमाण्डौं । उपत्यका विकास प्रधिकरणले उपत्यकामा ३०० किलोमिटर सडक फराकिलो बनाएको छ । चालु […]
के तपाई प्लटिङ गरिएको जग्गा किन्दै हुनुहुन्छ ? होश गर्नुहोस् जग्गा रोक्का हुनसक्छ काठमाण्डौँ। स्वीकृति नलिई जग्गा खण्डीकरण (प्लटिङ) गरेको पाइएमा कारबाही गरिने काठमाण्डौँ […]
काठमाडौमा यसरी बन्दैछ बाहिरी चक्रपथ,तपाईको जग्गा के हुन्छ अब हेर्नुस् ? काठमाडौ । बहुप्रतिक्षित बाहिरी चक्रपथ आयोजनाको काम अबको एक महिना भित्रै सुरु हुने भएको छ […]